चे-ग्वेभाराको चर्चित लेखः क्रान्तिकारी आचरणबिना समाजवादको कल्पना नगर्नुस् « Bagmati Online
चे-ग्वेभाराको चर्चित लेखः क्रान्तिकारी आचरणबिना समाजवादको कल्पना नगर्नुस्
अनुवादक : राजेन्द्र महर्जन
प्रिय साथी, हुन त टिप्पणी लेख्न अलि ढिलो भइसकेको छ, तापनि आफ्नो बाचा पूरा गर्ने आशासहित मैले अफ्रिकाको यात्राको क्रममा यी टिप्पणीहरु लेखिरहेको छु। माथि उल्लेखित शीर्षकअनुरुप टिप्पणीहरु लेख्ने प्रयत्न गर्नेछु। मलाई आशा छ – पाठकहरुका लागि यो रुचिकर हुनेछ। हामी समाजवादको निर्माणमा उद्यत छौं। समाजवादका विरुद्ध पूँजीवादी प्रवक्ताहरु पनि विचारधारात्मक संघर्षमा लीन छन्। यस्तो संघर्षको क्रममा उनीहरु धेरैजसो के तर्क दिन्छन् भने समाजवादमा वा समाजवादको निर्माणकालमा राज्यको हितका लागि व्यक्तिलाई बलि दिइन्छ। म केवल सिद्धान्तको आधारमा मात्रै यस तर्कको प्रतिवाद गर्दिनँ, बरु यसको प्रतिवादमा क्यूबाली अनुभवका तथ्यहरुसमेत प्रस्तुत गर्नेछु र सामान्य स्वभावको टिप्पणी अगाडि सार्नेछु। सबैभन्दा पहिले म सत्तामाथि अधिकार जमाउनुभन्दा अगाडि र पछाडिको आफ्नो क्रान्तिकारी संघर्षको इतिहासको विस्तृत रुपरेखा प्रस्तुत गर्नेछु।
हामी सबैलाई थाहा छ- क्रान्तिकारी संघर्षको शुरुआत २६ जुलाई, १९५३ मा भएको थियो, जुन संघर्ष पहिलो जनवरी १९५९ मा समाप्त भएको थियो। २६ जुलाईको दिन बिहान सबेरै ओरियन्ट प्रान्तको मोन्काडा छाउनीमाथि फिडेल क्यास्त्रोको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले आक्रमण गरेको थियो। त्यो आक्रमण असफल भएको थियो। यो असफलताले ठूलो बिपत्ति ल्यायो। जीवित रहनु भएका मानिसहरुलाई बन्दी बनाइयो। मुक्त भएपछि उहाँहरुले फेरि शुरुदेखि क्रान्तिकारी संघर्षको सूत्रपात गर्नुभयो। यही प्रक्रियाको क्रममा, व्यक्ति नै आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको थियो, जुन प्रक्रियामा समाजवादको बीऊमात्रै रहेको थियो। व्यक्तिकै रुपमा देखापर्नु भएका यही विशिष्ट र एक्लो खास मानिस नै हाम्रो विश्वसनीय मनुष्य बन्नुभयो। र, उहाँलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीको सफलता वा असफलता उहाँकै कार्य–क्षमतामाथि निर्भर थियो।
त्यसपछि छापामार युद्धको चरण आयो। यस युद्धलाई दुई भिन्नाभिन्नै वातावरणअन्तर्गत विकसित गरियो। ती दुई भिन्नाभिन्नै वातावरणमा एकातिर जनता थिए, अर्कोतिर छापामारहरु! त्यसबेलासम्म जनता अचेतन भीडको रुपमा थियो, जसलाई एकजूट पारी परिचालन गर्नु जरुरी थियो। अर्कोतिर छापामारहरु क्रियाशील थिए : जनताका अगुवाका रुपमा, जनपरिचालनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने इन्जिनको रुपमा, क्रान्तिकारी चेतना र जुझारु उत्साहका जनकका रुपमा! विजयका लागि आवश्यक आत्मगत स्थितिको सिर्जना गर्ने उत्प्रेरक शक्ति पनि यही अगुवा दस्ता थियो। म यहाँ फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, हाम्रो विचार–शक्तिलाई सुस्तरी–सुस्तरी सर्वहाराकृत रुप दिने कार्यमा, हाम्रा बानी–व्यहोराहरु र हाम्रा मन–मस्तिष्कहरुमा भइरहेको क्रान्तिमा यही व्यक्ति नै आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको थियो।
क्रान्तिकारी सशस्त्र सैन्य–शक्तिअन्तर्गतका माथिल्ला पदहरु पाउने सियरा माइस्त्राका प्रत्येक योद्धाहरुले विशिष्ट काम गर्नु भएको थियो। हो, यस प्रकारले कामहरुकै आधारमा उहाँहरुले ती पदहरु पाउनु भएको हो। पहिलो वीरतापूर्ण कालमा यिनै व्यक्तिहरुले महानतम् जिम्मेवारी र विशाल जोखिमहरुले भरिएका कर्तव्यहरु आफ्नो काँधमा लिई फत्ते गर्नुभयो। आफ्ना कर्तव्यहरु पालना गर्नुलाई नै उहाँहरुले परम सन्तोष प्राप्तिको बाटोको रुपमा लिनुभयो, अन्य केही पुरस्कारको आशा गर्नुभएन। हाम्रो क्रान्तिकारी शैक्षिक कार्यमा हामी सधैँ नै यही शिक्षाप्रद विषयबारे बारम्बार चर्चा–परिचर्चा गर्ने गर्छौं। हाम्रा योद्धाहरुको मनोवृत्ति र आचरणमा हामी भविष्यको नव मानवको झलक देख्न थालेका छौं।
हाम्रो इतिहासको अन्य कालखण्डमा क्रान्तिकारी उद्देश्यप्रतिको सम्पूर्ण लगनशीलताले भरिपूर्ण कार्यहरुलाई दोहोर्‍याइएको छ। ‘अक्टोबर संकट’ र ‘प्लोराको तूफान’ को समयमा हामीले सम्पूर्ण जनसमुदायद्वारा गरिएका अनौठो वीरतापूर्ण र उत्तम बलिदानीपूर्ण कार्यहरु देखेका छौं। वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दैनिक जीवनका यस्ता वीरतापूर्ण कार्य एवं मनोवृत्तिहरुलाई श्रृंखलाबद्ध र स्थायी बनाउने बाटोको खोजी गर्नु नै हाम्रा आधारभूत काम कर्तव्यहरुमध्ये एक हो। सन् १९५९ मा क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना भयो, त्यसमा गद्दार पूँजीपति वर्गका अनेक प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी भए। शक्तिको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको विद्रोही सेनाको उपस्थितिले क्रान्तिकारी सत्ताको दिगोपनाको प्रत्याभूति दिएको थियो।
पछि गएर गम्भीर अन्तरविरोधहरु विकसित भए। ती अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने प्रक्रिया सर्वप्रथम तब शुरु गरियो, जब ७ फेब्रुअरी, १९५९ मा फिडेल क्यास्त्रोले प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। यस प्रक्रियाको अन्त्य तब भयो, जब त्यसै वर्षको जुलाई महिनामा जनताको ठूलो दवाबबश राष्ट्रपति उरुतियाले राजीनामा दिनुभयो। क्यूबाको क्रान्तिको इतिहासमा स्पष्ट रुपले परिभाषित नख–शिख र रुपरेखासहित एउटा नयाँ बहुमुखी चरित्रको उदय भयो, त्यो चरित्र हो; जनता! हो, जनता त इतिहासको मंचमा सुव्यवस्थित रुपले बारम्बार उदाइरहने छन्। के दाबी गरिन्छ भने यो बहुमुखी चरित्र भएको जनता भनेको समान श्रेणीका तत्वहरुको कुलजोडमात्रै हो, यिनीहरुले पाल्तु भेडा–बाख्राहरुले जस्तै व्यवहार गर्छन्। तर यथार्थ के होभने जनता भनेका समान श्रेणीका तत्वहरु होइनन्, न त भेँडा–बाख्राहरु नै हुन्। बरु उनीहरुमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको राज्य–ब्यबस्थाले उनीहरुलाई एउटै श्रेणीमा भेँडा–बाख्रालाई जस्तै कोचेर राखेको कारणले मात्र त्यसो देखिएको हो।
अब म समाजवादको निर्माणसँग सम्बन्धित अद्भूत र मार्मिक नाटकका कलाकारको रुपमा रहेको व्यक्तिलाई एउटा अनौठो अस्तित्व तथा समाजको सदस्यको नाताले उसको दोहोरो अस्तित्वलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मलाई लाग्छ, त्यस व्यक्तिको अनिर्मित गुणलाई मान्यता प्रदान गर्नु नै सबैभन्दा धेरै सोझो तरिका हुनेछ। हो, त्यो व्यक्ति अहिलेसम्म पनि अधुरो सिर्जना हो! वैयक्तिक चेतनाभित्र विगत कालका कमी–कमजोरीहरुलाई सच्याउनका लागि अविराम प्रयासको आवश्यकता छ। यो प्रक्रियाअन्तर्गत दुईवटा पाटाहरु हुन्छन्। एकातिर परोक्ष र प्रत्यक्ष शिक्षाद्वारा समाज व्यक्तिमाथि क्रियाशील हुन्छ भने अर्कोतिर व्यक्ति स्वयं पनि आत्म–शिक्षाको सचेत प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढ्छ।
अहिलेको आवश्यता होः एउटा वैचारिक–सांस्कृतिक संयन्त्रको रचना गर्नु, जसले स्वतन्त्र प्रयोगलाई पनि स्वीकृति दिनेछ र राज्यद्वारा अनुदानित उर्वर भूमिमा निकै सजिलैसँग हुर्कने–बढ्ने बनमारा झारपातहरु पनि उखेलेर फ्याँक्नेछ। हाम्रो देशमा यान्त्रिक यथार्थवादका गल्तीहरु देखा परेका छैनन्, बरु यसको ठीक उल्टो कुरा देखा परेको छ। यसो हुनुको कारण हो : एउटा त्यस्तो नवमानवको सिर्जनाको आवश्यताबारे राम्ररी बोध नुहुनु, जुन नवमानवले न त उन्नाइसौं शताब्दीका विचारहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ, न त हाम्रो पतनोन्मुख शताब्दीकै प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
उन्नाइसौं शताब्दीको मानिसविरुद्ध भएका प्रतिक्रियाहरुकै परिणामस्वरुप बीसौं शताब्दीको पतनोन्मुखताको पुनरावृत्ति भएको हो। यो कुनै गंभीर गल्ती त होइन, तर पनि हामीले यस्ता गल्तीहरुमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, ताकि संशोधनवादको मार्ग प्रशस्त नहोस। अहिले निरन्तर रुपमा अति नै बृहत् जनसमूहको विकास भइरहेकोछ। समाजभित्र नयाँ विचारले यथेष्ट शक्ति आर्जन गरिरहेको छ। समाजका प्रत्येक सदस्यको सर्वाङ्गीण विकासका भौतिक संभावनाहरुको कारणले यो काम पहिलेभन्दा बेसी अर्थपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण हुँदै गइरहेका छ। वर्तमान संघर्षमय छ र भविष्य हाम्रै हो।
हाम्रो कर्तव्य हो : विवादहरुमा नराम्ररी फँसिरहेको वर्तमान पुस्तालाई विकृत हुनबाट रोक्नु र मुनाझैं टुसाइरहेको नयाँ पुस्तालाई विसंगत हुनबाट रोक्नु! हामीले सरकारी विचारधाराअनुकूलका क्रीतदासहरुको सिर्जना कदापि गर्नु हुँदैन, न त राज्यकोषका वेतनभोगी जागीरेहरुको श्रृष्टि गर्नु नै हुन्छ, जसले सुती सुतीकन कोटेशनहरु (ऊक्तिहरु) कण्ठ गर्दै स्वतन्त्रताको माला जप्ने गर्छन्। हामीले साँच्चैका क्रान्तिकारीहरु जन्माउनु पर्छ, जसले जनताको वास्तविक आवाजमा नवमानवको गीत गाउनेछन्। निश्चित रुपमा यो प्रक्रियाका लागि समय बेसी जरुरी हुन्छ। हाम्रो समाजमा युवाहरु र पार्टी दुबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
हाम्रा कामहरुको उद्देश्य भनेको यही शिक्षालाई हरदम व्यवस्थित गरिरहनु हो। यसका लागि पार्टी जीवित उदाहरण बन्नुपर्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरु कठिन श्रम र बलिदानको नमूना बन्नुपर्छ। आफ्नो कर्मद्वारा उनीहरुले जनतालाई क्रान्तिकारी उद्देश्य र कर्तव्यतिर अगाडि बढाउने अभियानको अगुवाइ गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो : निर्माणका कामहरुका कठिनाइहरुका विरुद्ध, वर्ग शत्रुहरुका विरुद्ध, विगतका कमी–कमजोरी र गल्तीहरुका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध वर्षौं वर्षसम्म संघर्ष …….. अब म व्यक्तिद्वारा खेलिएको भूमिकाको बारेमा, इतिहासको निर्माण गर्ने जनताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। म यहाँ जे जति कुरा राख्छु, ती सबै हाम्रा अनुभवहरु हुन्, यी कुनै प्रेस्क्रीप्शन (उपचार विधि र औषधी) होइनन्।
हामी समाजवादीहरु बेसी स्वतन्त्र छौं, किनकि हामी धेरै सन्तुष्ट छौं, हामी बेसी सन्तुष्ट छौं, किनकि हामी धेरै स्वतन्त्र छौं। हाम्रो सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको ढाँचा निर्माण भइसकेको छ; तर त्यसलाई मासु भर्नु र साजसज्जा गर्नु जरुरी छ। हामी यसको सृजन गर्नेछौं। हाम्रो स्वतन्त्रता र त्यसको दैनिक सुरुक्षाका लागि हाम्रो रगत र बलिदानको आवश्यकता छ। हाम्रो बलिदान सचेततापूर्वक हुन्छः यो बलिदान हामीले निर्माण गरिरहेका स्वतन्त्रताका लागि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुन्छ।
हाम्रो बाटो लामो छ र आंशिक रुपमा हाम्रो बाटो अज्ञात पनि छ। हामी हाम्रा सीमाहरुप्रति सचेत छौं। हामीहरुले एक्काइसौं शताब्दीको मानव सिर्जना गर्नेछौं; हो हामी आफैंले! दैनिक कारबाहीको अग्निपरीक्षामा होमिएर हामी आफूलाई इस्पात बनाउनेछौं र एउटा नयाँ प्रविधियुक्त नवमानव कुँद्नेछौं। व्यक्तिले जनपरिचालन र नेतृत्वको भूमिका त्यति हदसम्म मात्र खेल्न सक्छ, जति हदसम्म उसले जनताका सर्वोच्च गुणहरु र उच्च अभिलाषाहरु बोक्न सक्छ र बाटोमा दिग्भ्रमित नभइकन अगाडि बढ्न सक्छ। बाटो पहिल्याउने, त्यसबारे स्पष्टता हासिल गर्ने काम भनेको अगुवा समूहको कर्तव्य हो, राम्राहरुमध्ये पनि सर्वोत्तम व्यक्तिहरुको समूह अर्थात् पार्टीको कर्तव्य हो यो।